Waa maxay uurka ilma qoolan, astaamo noocee ah ayaase lagu gartaa? – Barocaafimaad |
Waa maxay uurka ilma qoolan, astaamo noocee ah ayaase lagu gartaa?
Ilmaha ku abuurma minka banaankiisa waxaa loo yaqanaa ilma qoolan. Uurka noocaan ah wuxuu dhacaa marka ukun bacrimisan ay ku dhegto boos aan aheyn booski loogu talogalay oo ah dhinacyada minka. Uurka caadiga ah waxaa ukunta bacrimisan laga rabaa iney ku dhegto dahaarka gudaha ee ilmo galeenka.
Uurka qoolan wuxuu inta badan ku sameysmaa mid kamid ah tuubooyinka ugxaanta kasoo qaada ugxaan-sidaha. Mararka qaar uurka qoolan wuxuu ku sameysmi karaa ugxaan sidaha laftarkiisa. Uurkujirta iyo dhuunta ilmo galeenka.
Uurka qoolan sida caadiga ah ma ahan uur ku dhamaada guul. Ukunta bacrimisan ma ahan mid badbaadi karta. Uurka sii korayana wuxuu dhaawacaa xubno ka mid ah kuwa taranka. Hadii aan laga gaarin, waxaa halis gali kara nolosha hooyada.
Hadii si dhaqsa ah looga gaaro uurka qoolan waxaa suurta gal ah in hooyada ay mustaqbalka qaado uur caadi ah.
[divider style=”single” top=”1″ bottom=”1″]
Akhriso: Sida loo daryeelo uurka
Akhriso: Maxaa u wanaagsan hooyada uurka leh
Astaamaha lagu garto ilma qoolan
Xiliyada ugu horeeyo uurka qoolan waxaa laga yaabaa inuusan yeelan astaamo lagu garto ama in astaamaha ay kala siman yihiin uurka caadiga ah, sida caadada oo aan imaan, lalabo iyo naasaha oo danqada
In kastoo uurka qoolan uusan sii badbaadi karin, hadii aad iska qaadid baaritaanka uurka waxaa soo baxaya inaad lee dahay uur. Astaamaha kale ee lagu garan karo ilma qoolan waxaa ka mid ah:
Dhiig xafiif ah oo ka yimaada hooyada
Xanuun gudaha miskaha laga dareemo
Dareen saxaro soo booddo ah
Dhiig bax gudaha ah, hadii ay tuubooyinka minka dilaacaan
Maxaa sababa ilma qoolan
Uurka ayaa ku sameysma tuubooyinka ugxaanta qaada, hadii ugxaanta ay ku xanibanto gudaha tuubada, sidoo kale waxaa sababi karo hormoonada oo aan isku dheelitirneyn ama ugxaanta oo aan si wanaagsan u korin.
Halista sababi karta uur qoolan
Waxaa lagu qiyaasaa 20 kamid ah 1,000 uur iney noqdaan uur qoolan. Arimaha lala xiriiriyo iney sababaan waxaa ka midh
Uur qoolan oo hada ka hor ay hooyada qaaday. Waxaa sahlanaanay in ay hooyadu markale qaado ilma qoolan
Infekshan ama caabuq. Caabuqa ka dhaca tuubooyinka ilmo galeenka ama infekshan ku dhaca gudaha miskaha iyo infekshanada ka dhasha jabtada iyo kalaamiidiya.
Dhibaatooyinka uur qaadista iyo qaadashada dawooyinka fududeeya uurka.
Qalabka looga hortago uurka ee la geliyo gudaha minka. Waxaa dhif ah in hooyada ay qaado uur, hadiisa ay qaado waxey u badan tahay inuu noqdo uur qoolan.
Cabidda sigaarka. Sigaarka ayaa kor u qaada halista keeni karta uurka noocaan oo kale
Dhibaatooyinka ilma qoolan
Hooyada hadii ay lee dahay uur qoolan, oo aan si dhaqsa ah looga gaarin waxaa suurta gal ah iney dilaacdo tuubada qaada ugxaanta, hadii arintaas ay dhacdo waxay keentaa halis nololeed.
Goormaa lala kulmaa dhaqtarka?
Raadi daryeel caafimaad oo degdeg ah hadii aad isku aragtid astaamaha lala xiriiriyo uurka qoolan, sida
Calool xanuun aad u daran ama uu wehliyo xanuun laga dareemo gudaha miskaha
Madax wareer aad u daran ama suuxdin
Garbaha oo ku xanuuna
Uurkaan qaabka lagula tacaalo ayaa ah in hooyada laga qallo ama lasiiyo dawooyin looga soo xaaqayo uurka.
Bararka qanjirka taroodhka ee loo yaqaano cuna bacuuc
Qodobada laga rabo haweeney walbo iney ku dadaasho si ay u joogteyso caafimaadkeeda
Muhiimadda ay leedahay in lagu dadaalo caafimaadka naasaha